Vaovao Scream Tv mampiseho fanavaozana ny toetra amam-panahy
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Vaovao Scream Tv mampiseho fanavaozana ny toetra amam-panahy
by Admin Aprily 7, 2014
by Admin Aprily 7, 2014 952 hevitra
Ny kinova amin'ny fahitalavitra Scream amin'ny farany dia mandefa sy mitifitra ny mpanamory fiaramanidina azy ireo. TVLine Nahazo mihazona ireo famaritana toetra izay ampiasaina amin'ny fandefasana ilay script. Manaraka ny sarimihetsika, ny andian-tsarimihetsika Scream TV dia toa manana mpilalao tanora indrindra.
Harper Duval: Hatsaran-tarehy 16 taona “izay somary diso saina sy manam-pahaizana ka tokony ho lolo ara-tsosialy” nefa natolotry ny vahoaka malaza ho iray amin'ny azy manokana. “Mahatsiaro tena ho meloka izy satria nanalavitra an'i Audrey sakaizany akaiky indrindra,” saingy farafaharatsiny mba nanana fifandraisana 'Gilmore Girls'-esque tamin'i Neny Maggie hitazomana ny sainy.
Audrey Jesen: Ny BFF teo aloha an'i Haper dia nofaritana ho “zanaka vavy liana amin'ny pasiterana loterana” izay “misambotra kokoa noho ny tsara tarehy”. Maniry ny ho mpamorona horonantsary ity "manirery artsy" ity ary mizara fifamatorana akaiky amin'i Noa, manam-pahaizana momba ny haitao.
Noa Foster: Ny confidante akaiky an'i Audrey dia ny “mahay mamorona, mamiratra ary mahay teknolojia mba ho Steve Jobs manaraka.” Tsara vintana ho azy izy, mahatsikaiky mahatsikaiky ("a la John Cusack amin'ny fahatanorany") izay manampy azy hitety ny efitrano malalaky ny lisea azony. Inona koa, i Noa dia manana “fahalalana encyclopédie momba ny boky, sarimihetsika, fahitalavitra, fampiharana sns”.
Margaret "Maggie" Duval: Ny renin'i Harper, teo amin'ny faha-40 ka hatramin'ny faha-XNUMX taonany, dia mpitsabo ara-pitsaboana ao an-tanàna, "geek ara-tsiansa efa lehibe izay nanadino ny hatsarany." Maggie mandany fotoana be amin'ny fiezahana hanonitra ny zava-misy fa nandao azy ireo ny dadan'i Harper. Oh, ary manana "tsiambaratelo maizina tamin'ny lasa izy."
Mpanoratra Jill Blotevogel (Ravenswood, Nosy Harper, Eureka), ny mpanamory dia manomboka amin'ny horonantsary YouTube lasa viral, izay tsy ho ela dia mitarika olana amin'ny tanora Audrey ary toa izany koa no izy “Nahatonga ny famonoana olona izay nanokatra varavarankely ho an'ny taloha tao an-tanàna be korontana.”
Ahoana ny hevitrao momba ny hiantsoantsoantso hoe Scream ho fandaharana amin'ny fahitalavitra? Ampahafantaro anay amin'ny hevitra.
Ary ho anao rehetra mitabataba SUPER FANS any. Zahao ity fanangonana mahafinaritra ity:
Ireo sarimihetsika SCREAM efatra dia tafiditra ao amin'ny Editions collector manokana, miaraka amin'ny edisiônera mpanangona SCREAM 2 ihany no misy an'ity sety boaty ity. Kapila manokana iray ahitana horonantsary fanadihadiana ambadiky ny seho, fitsapana an-tsokosoko, fitsinjaram-pahefana ary fampiasa amin'ny efitrano Cutting Room manokana ahafahan'ny mpijery manova seho ao an-trano. Ny fiasa DVD-ROM dia misy ny screensaver, ny lalao trivia, ny sarimihetsika ary ny lisitra fitifirana.
Tsindrio eto raha hividy!
Browse Cateories Select Category 4K UHD (4) Amazon (sarimihetsika) (7) Amazon (andiany) (12) AppleTV + (6) Blu Rays (19) Horohoro amin'ny hatsikana (49) Tantara an-tsary (14) Zavatra tsara hividianana (21) Cool Stuff tokony hatao (5) Vaovao momba ny fialamboly (3) Facebook (andiany) (1) Angano (45) Rakitra hita (27) Gore (24) Haunts (3) HBO (sarimihetsika) (6) HBO (andiany) (7) Boky mahatsiravina (63) Vaovao momba ny fialam-boly mahatsiravina (10,931) Sarimihetsika mahatsiravina (427) Horror Series (126) Subgenres mahatsiravina (10) Hulu (andiany) (6) Resadresaka nifanaovana (sarimihetsika) (42) Resadresaka nifanaovana (andiany) (5) Horohoro LGBTQ (42) Lisitry (sarimihetsika) (40) Lisitry (andiany) (2) Tsena (21) Monster Horror (9) Sarimihetsika (2) Hevitra momba ny sarimihetsika (63) Sarimihetsika (15) Mozika (38) Netflix (sarimihetsika) (32) Netflix (andiany) (46) Tsy angano (5) Paranormal (76) Fampihorohoroana ara-tsaina (mampientanentana) (53) Andiany (1) Famerenana andian-dahatsoratra (9) Shudder (sarimihetsika) (56) Shudder (andiany) (19) Slasher (4) Hafahafa sy tsy mahazatra (39) Sarimihetsika mivantana (106) Streaming Series (45) Kilalao (4) Tranofiara (lalao) (1) Tranofiara (sarimihetsika) (282) Tranofiara (andiany) (49) Lalao trailer (1) Heloka tena izy (49) TV Series (4) Lalao video (190) YouTube (sarimihetsika) (3) YouTube (andiany) (13)